नेपाली नक्सामा लिम्पियाधुरा : भारतको कब्जामा रहेको ३१० वर्गकिमि भूभाग थपियो | HimalDarpan
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुन्य ओलीका अनुसार ०३२ सालमा नेपालले पहिलोपटक नक्सा बनाउँदा लिम्पियाधुरासम्मको भाग समेटेको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको थियो । लिम्पियाधुरा छुटाएर सार्वजनिक भएको नक्सा अहिलेसम्म चलनमा थियो ।
नेपाल आफैँले नक्सा तयार पारेको वि.सं. ०३२ सालमा हो । नक्सा तयार पार्न राष्ट्रसंघका तर्फबाट एचई क्यालावे र विभागका तर्फबाट नक्सा तयार गर्ने महाशाखा प्रमुख पुण्यप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । पछि नापी विभागका महानिर्देशकसमेत भएका ओलीका अनुसार नक्सा तयार पार्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटिएको थियो । तर, तत्कालीन पञ्चायती सरकारले अहिले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको उनी बताउँछन् । ‘भारतसँग संयुक्त सीमा सर्भे नगरुन्जेल लिपु भञ्ज्याङसम्म मात्र समेटेर नक्सा गर्नू, पछि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरौँला भन्ने सरकारको आदेश थियो,’ ओलीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
भारतसँग वार्ता टुंग्याएर त्रिदेशीय बिन्दु तय गरौँ : लीलामणि पौड्याल, चीनका लागि पूर्वराजदूत
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सुगौली–सन्धिअनुरूपको पश्चिमी सिमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्ने नक्सा ढिलै भए पनि जारी हुनु स्वागतयोग्य छ । विगतका कमी–कमजोरीबारे समीक्षा पछि गरौँला । अहिलेको कामबारे जस लिने होडबाजी पनि नगरौँ । आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझेकै छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता शरत्सिंह भण्डारीले तथ्य र प्रमाणहरूसहित कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवाद गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । ‘सीमा समस्या द्विपक्षीय हो । यस्तो समस्या जहिले पनि राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो भूभाग एक इन्च पनि छाड्नुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । हाम्रो पार्टीको मान्यता पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘सरकारले के निर्णय गरेको छ, पूर्ण रूपमा जानकारीमा आइसकेको छैन । यदि सरकार सीमा समस्या हल गर्न अगाडि बढेको हो भने हाम्रो साथ र समर्थन रहन्छ । तथ्य र प्रमाणहरूसहित कूटनीतिक र राजनीतिक संवादको विकल्प छैन ।’ नयाँ पत्रीका दैनिकमा खबर छ ।